अष्ट्रियामा आफ्नै तीन सन्तानको ह’ त्या गर्ने नेपाली म’हिला को हुन् ? किन यस्तो गरिन् त ?
Home समाचार अष्ट्रियामा आफ्नै तीन सन्तानको ह’ त्या गर्ने नेपाली म’हिला को हुन् ?...
काठमाडौं । अष्ट्रियामा एक नेपाली महिलाले आफ्नै तीन सन्ता’नको ह’ त्या गरेको अ’भियोगमा प’क्रा’उ परेकी छिन् । उनले शनिबार आफ्ना तीन सन्ता’नको ह’ त्या गरेपछि आफैं प्रहरीलाई खबर गरेकी थिइन् । उनले घट’नास्थलमा प्रहरी आएपछि आफैंले आफ्ना तीन सन्तानको ह’ त्या गरेको बताएकी थिइन् । ती महिलालाई प्रहरीले नि’यन्त्र’णमा लिएर थप अ’नुसन्धा’न गरिरहेको बताइएको छ ।
स्थानीय मिडियाका अनुसार ती नेपाली महिलाका श्रीमान उनीसँग बस्दैनथे । महिला आफ्ना तीन सन्तानसँग बस्दै आएकी थिइन् भने उनका श्रीमान उनीसँग नबसेर छुट्टै बस्दै आएका थिए । श्रीमानसँग छुट्टिएर बसेको उनको पारिवारिक पृष्ठ भूमिलाई हेरेर प्रहरीले पारिवारिक क’लह’का कारण घ’ट’ना भएको हुन सक्ने प्रा’रम्भिक अनुमान लगाएको छ ।
घ’टनास्थलमा प्रहरी पुग्दा महिला स्व’यं पनि घा’इ’ते अ’वस्थामा थिइन् । उनले आफ्नै हा’त का’ट्ने प्रयास गरेको हुन सक्ने चो’टको रुपले देखाएको प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै स्थानीय मिडियाले लेखेका छन् । उनले पनि आ’त्म’ ह’त्या’ गर्ने प्रयास गरेको पृष्ठभूमिले पनि उनलाई यस्तो अ’पराध’ तर्फ मानसिक त’नावले उक्साएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।
उनले नौ वर्षीय छोरी, तीन वर्षीय छोरी र आठ महिने छो’राको ह’ त्या गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ । प्रहरी उनी बसेको अपार्टमेन्टमा पुग्दा तीन वर्षीय बालिका र आठ महिने बालकको ज्या’ न गइसकेको थियो तर नौ वर्षीय बालिकाको सा’स चल्दै गरेको पाइएकोले उनलाई तत्काल अस्पताल लगिएको थियो तर अस्पतालमा उनको ज्या’ न गयो ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अष्ट्रिया उच्च स्रोतले डिसीनेपाललाई दिएको जानकारी अनुसार ती महिला बुटवलकी ३१ वर्षकी चन्द्रा भट्टराई अर्याल हुन् । यस विषयमा भियनास्थित नेपाली दूतावासले स्थानीय प्रहरीसँग सम्पर्कमा रहेको जानकारी दिएको छ ।
दूतावासले आफ्नो फेसबुकमा लेखेको छ ‘आज मिति १७ अक्टोबर २०२० का दिन भियनामा घटे’को अ’कल्पनीय घट’नाप्रति सम्पूर्ण नेपाली समुदाय सहित यस राजदूतावास परिवार समेत अ’त्यन्त दु’खित रहेको छ । सो घट’ नाका सन्दर्भमा स्थानीय प्रहरीसँग राजदूतावास नियमित स’म्पर्कमा रहिरहेको छ ।’
Previous articleप्रहरी ह’ त्या प्र’करण : ह’त्या’मा संलग्न सात जनालाई कैलाली प्र’हरीद्धारा सार्वजनिक
Next articleदशैँमा काठमाडौंमा लकडाउन नहुने, लापरवाही गर्नेलाई कोरोनाले कारवाही गर्ने ! (भिडियो)
बजारमा तहल्का मचाउदै फाइटरमेन बालै फरर, भिडियो भाइरल (भिडियो सहित )
जेष्ठ नागरिक दिवसको अवसरमा स्याङ्जाको गल्याङ मा आज जेष्ठ नागरिकलाइ सम्मान ।
कोरोनासंग लडिरहेका हास्यकलाकार हरिवंश आचार्यले दशैको मुखैमा लेखे यस्तो मनछुने स्टाटस !
खुशीको खबर आजदेखि फोन गर्न, फेसबुक चलाउन र युट्युब हेर्न पैसा लाग्दैन ! तरिका यस्तो...
एप्पलको सस्तो फोनको रुपमा आईफोन ट्वेल्भ मिनी सार्वजनिक, यस्ता छन् विशेषता